China iplastiki cap ye tinplate can (SPCA1160) umzi-mveliso kunye nababoneleli |Jiuxing
ikhowudi yemveliso: I-SPCA116
Uphawu: 1.Akuchitheki,ukusebenza kakuhle kwitywina.2.Izinto zethu ezikrwada zifikelele kumgangatho webakala lokutya, elingenancasa kwaye lingenatyhefu.3.ezinye iikepusi zeplastiki zinomsebenzi wokulawula ukuhamba okufunekayo.
I-4.ininzi yokuvalwa kwethu ixhotyiswe ngeempawu zobungqina, eziqinisekisa ukuthembeka kwemveliso;
5.ezinye iikepusi zeplastiki zinento engaconsiyo, zinika umlebe ongaconsiyo wokugalela imveliso;
Le cap yebhotile yonke enye ifanelekile kwiitoti zetinplate.Beka i-cap yebhotile kwindawo efanelekileyo, uze uyicinezele phantsi ukuze uyilungise kwi-tinplate can, enokuthi isebenze njengetywina.Vula isiciko esiphezulu kwaye uthathe i-ring ukuthulula imveliso.Le mveliso yenziwe nge-PE ehambelana nendalo yokutya-ibanga lezinto eziluhlaza, ngaphandle kwamashishini okanye izinto ezisetyenzisiweyo, ezingenazo zinetyhefu kwaye zingenancasa, kwaye umgangatho uqinisekisa.
Ngaphambili: ikepu yeplastiki yokutya (FPCE501)
Okulandelayo: ikepusi yeplastiki yesinongo (SPCS402)
Iziqwenga ezibini zePlasitiki Cap ene-tsala-ring (SPCB206)